Archives des Alasora - Midi Madagasikara
Alasora : Nahazo « commissariat » vaovao
Redaction Midi Madagasikara 29 novembre 2013 Alasora, commissariat, vaovao
Nahazo commissariat vaovao ny eny amin’ny kaominina Alasora. Omaly no notokanana tamin’ny fomba ofisialy izany. Io dia vokatry ny fiaraha-miasan’ny kaominina sy ny ministeran’ny filaminana anatiny. Mitentina 45 tapitrisa ny tetibidin’ity birao vaovao ity ary manara-penitra tokoa,satria ahitana birao maromaro sy trano fidiovana. Polisy 25 kosa no hiasa ao hampihodina ity “commissariat” ity, ary mbola…